मानिसहरू दयालु हुन्छन् । दयालु हुनु मानव स्वभाव हो । मानव इतर प्राणीमा समवेदना र पीडा बताउने भाषा हुँदैन, सुख–दुःख बाँड्ने स्वभाव र सामथ्र्य हुँदैन । चाहेर पनि एकअर्कालाई सहयोग गर्न सक्दैनन् । विवेक पनि देखाउन सक्दैनन् ।
चेतना, अनुभूति र विवेकले मानिसलाई मानिस बनाएको हो । जातीय श्रेष्ठता पाएको हो । सृष्टिको श्रेष्ठता विवेक, माया र समवेदनामा देखिने हो ।
जीवन सुख–दुःखको आरोह–अवरोह हो । परिस्थितिवश मानिस पीडामा जलिरहेको हुन्छ । पीडाको जलाइ आँशुबाट पोख्छ, अभिव्यक्तिबाट पोख्छ । चेहराको भावभङ्गीमा पनि पोखिन्छ । पीडा पोख्न पाउँदा पनि मानिस हलुको अनुभूति गर्छ ।
दयालु मानिसहरू अरुको दुःखको अनुभूति गरेर दुःखमा साथ दिन्छन् । अरुको सुख–दुःखमा साथ दिनु मानव आचरण, अझ भनौ मानवीय मूल्य हो । सच्चा साथीहरू सुखको पनि दुःखको पनि साझेदारी गर्छन् । त्यसैले उनीहरू साथी कहलिएका हुन् । सुखमा मात्र साथ दिनेहरू साथी कहलिँदैनन् ।
दुःखको दुखाइ वा भावनात्मक अनुभूति पीडा हो । दुःखमा सहयोग र दयाको माग भावनात्मक रुपमा नै हुने गर्दछ । दुःखीहरू चेहराबाटै साथ मागिरहेका हुन्छन् र सहयोगीहरू पनि चेहराबाटै पनि सहयोगको प्रतिक्रिया दिइरहेका हुन्छन् । एकप्रकारको संवेगको आदानप्रदान हुने गर्दछ ।
दुःख बताउँदा पनि दुःख हलुका हुने विश्वास गरिन्छ । त्यसैले मानिसहरू दुःख बाँड्ने र बताउने गर्छन् । ठूला दुखान्त घटनामा औपचारिक रुपमा नै दुःख पोख्ने गरिन्छ । दुःखमा परेकालाई दुःखको मनोपरिवेशबाट अन्यत्र लैजाने प्रयास पनि गरिन्छ ताकि दुःखलाई भुल्न सकोस् ।
आफ्ना दुःख अरुलाई बताएर वा बाँडेर अरुलाई दुःखी बनाउनुहुन्छ र ? सामान्यतः दुःख आफैंमा राखिनुपर्छ । दुःख बाँडेर अरुलाई दुःखी बनाउनु हुँदैन । अरुलाई दुःखको अनुभूति र पीडाबोध गराएर कुनै फाइदा हुँदैन । दुःखको भार र अनुभूति प्रथम व्यक्तिले नै लिनुपर्छ तर सन्दर्भ र परिवेशले दुःखको अभिव्यक्ति खोज्छ । दुःखको आयाम र पीडाको घनत्व बढ्ने क्रमसँगै यसले स्वाभाविक निकास माग्छ, कहिले शब्दमा, कहिले भाषामा, कहिले हाउभाउ अनि संकेतमा । आँशुमा छचल्किएर पनि दुःख पोखिन्छ । कतिपय त चिच्याएर, कराएर, डाको छाडेर रोएर भए पनि दुःख पोखेर मनलाई धुने गर्छन् ।
सर्जकहरू मानवीय पीडा र दुःखका अनुभूतिलाई कला सिर्जनामार्फत पोख्ने गर्छन् । संसारका उत्कृष्ठ साहित्य, कला, संगीत, चलचित्र, नाटक दुःखको पृष्ठभूमिबाट सिर्जिएका हुन्, सबैले दुःखी अनुभूतिको निकास दिएका छन् । सर्जकहरू मानवीय दुःखको निष्पादन वा सम्प्रेसमार्फत मनको विरेचन गर्दछन् । शब्द वा सिर्जनामा दुःख पोखिँदा मन हलुको हुन्छ । दुःखको अभिव्यक्तिले समान मनहरू दुःखबोध गरेर आनन्दित हुन्छन्, दुःखीसुखको अनुभूति गर्दछन् । दुःखान्त आख्यान, नाटक, चलचित्रको घटनासँग स्वअनुभूति लिएर व्यक्ति आफू पात्रमा विलीन हुन्छ । त्यहाँको दुःख वा दुःख सिर्जनाका परिघटना आफैंको महसूस गर्दछ । भनौ कलाको आस्वाद गर्दछ ।
रोजे सेरेसले ‘उदास आइतवार’ गाएर धेरै जनालाई, विशेषतः प्रेम घायल मनहरूलाई भुलाउने प्रयास गरे । धेरै प्रेमी मनहरू दुःखीसुखको अनुभूतिमा रमाए । कतिपयले गीतको आस्वादसहित जीवन उत्सर्ग पनि गरे । लियो सायरा, विथोभान, शाल्जवर्गहरू दुःखका आलाप अन्तरामा धेरै दुःखीहरूलाई दुःखबाट मुक्त गरे । दुखीहरूका मन–मन छाम्नसक्ने भावाभिव्यक्तिले दुखीहरूलाई दुःखबाट हलुका बनाउँछ ।
सबै व्यक्ति कवि, कलाकार, सर्जक बन्न सक्दैनन् तर सबैका आ–आफ्नै दुःख र पीडाका भोगाइ छन्, अनुभूति आ–आफ्नै छ । पीडाबोध जीवनको यथार्थ हो । साहित्य कलामा झै वास्तविक जीवनमा दुःखका अनुभव गरिँदैन । आफ्नै दुःखमा दुःखीसुखको अनुभूति गरिँदैन । अरुको कथानक ट्रजेडीहरू हेर्न, अरुको दुःख पढ्न, कथा कविता कलामा स्वाद लिन राम्रो, आफूमा भएको नराम्रो । त्यसैले दुःखान्त कथाहरू उत्कृष्ठ हुन्छन्, दुःखको यथार्थ अनपेक्षित मानिन्छ । आफैंमा दुःखीकथाको अपेक्षा कहिल्यै गरिँदैन, गरिनु पनि हुँदैन । जीवनको अपेक्षा खुशी हो, दुःख होइन । दुःखीसुखका कथाहरू पनि खुशी जीवनका मार्गदर्शन हुन्, दुःखी जीवनको आमन्त्रण होइन ।
समवेदना दुःखको मनोविज्ञान हो । आफ्ना दुःख ठूला हुन्छन्, आफ्नै दुःखको अनुभूति मात्र उसले गर्छ । अरुको दुःख शतांश बोध अर्को व्यक्तिले गर्नै सक्दैन । मनको मर्म आफैंमा रहन्छ । सानो होस् कि ठूलो, दुःखबाट मुक्ति खोज्ने मानव स्वभाव हो । दुःखबाट मुक्ति खोज्न मानिस सतत रहन्छ । दुःखको मनोविज्ञानले साथ र सहानुभूति खोज्छ । दयालु मानिसहरू साथ दिन्छन्, सहानुभूति दिन्छन् तर दुःखीहरू भिख जसरी दया चाहँदैनन् । दयाले दुःख हटाउँदैन । साथले दुःख कम गर्छ तर कमै मानिस अरुको दुःखमा साथ दिन्छन् ।
दुःखमा दया माग्ने, दया स्वीकार्नेहरू दुःखमाथि विजय प्राप्त गर्दैनन्, उल्टै पराजित हुन्छन् । दया गर्नेहरू पनि दुःखबोध गर्दैनन् । दया देखाउनेहरू क्षणिक आत्मतुष्टि लिन्छन् । दुःखका भिखारीहरू सफलताको शिखर चुम्दैनन्, उल्टो दुःखको दलदलमा भासिन्छन् । दुःखबोध नगरी दया र सहानुभूति दिनुको कुनै अर्थ रहँदैन तर समाज कमजोरलाई दयाको भीख दिन्छ, दुःखमा साथ दिँदैन । साथ दिनेहरू अपवादमा हुन्छन्, उनीहरू नै मानवताका सच्चा पुजारी हुन् । उनीहरू सधै खुशी र निश्छल हुन्छन्् । दया स्वार्थमा हुन्छ, साथ निःस्वार्थ र निश्छल हुन्छ ।
समाज निर्वैयक्तिक बन्दैछ । व्यक्ति आत्मकेन्द्रित बन्दैछ । निजी सुखका लागि अरुको पीडा र परिस्थितिबोध गर्नु हुँदैन भन्ने भावना बलियो बन्दैछ । निजत्वको विस्तारले मानवीय विवेकमाथि धावा बोल्दै गएमा मानव सभ्यता र सिर्जनालाई कसरी सुरक्षित गर्ने ? निजत्वको सीमा र सम्भावना बुझेर नै समुदाय बनेको हो, सामुदायिकता विकास भएको हो । अरुको दुःखमा मन नदुखे मानिस जड चेतन र पशुभन्दा कति पृथक बन्ला ?
तृष्णा, लालसा र आशक्तिले सामूहिकता र आपसिकताको पर्खालहरू भत्किँदैछन् र वैयक्तिक सुखका धरोहरहरू खडा हुँदैछन् । दुखान्त कथामा रमाउने मनहरू दुःखबाट किन विषयान्तर बनेका होलान् ? सामाजिक अभियान्तहरू खै कता हराए ? सवाल तेर्सिएको छ तर यसखाले सवालहरू पनि छिट्टै भत्किने क्रममा गएका छन् ।
त्यसो त दुःखको सम्प्रेस किन गर्ने भन्ने सवाल पनि छ । दुःखको सम्प्रेसले आफ्नाहरूलाई दुःख र ईष्र्यालुहरूलाई खुशी तुल्याउँछ । ईष्र्यालुहरू परपीडामा खुशी हुन्छन्, दया केवल अभिनय र औपचारिकता हो । उसो भए आफ्नालाई दुःखी बनाउन किन दुःख बताउने ? यस अर्थमा दुःख बताउनुको कति अर्थ रहन्छ ? अरुलाई दुःखी बनाउनु मानव धर्म हो र ?
दुःखको मनोविज्ञान अनुसार दुःख निष्कासन खोज्छ, मनको विरेचन खोज्छ कि आँशु वा शब्दमा पोखिइहाल्छ । दुःखका अन्तिम बोली आमा शब्दको साहारा खोज्छ । शायद सबैभन्दा आफ्नाहरूतिर दुःख बग्ने गर्छ । त्यसैले आफ्नालाई दुःख बताएर दुःखी बनाउन नचाहँदा–नचाहँदै पनि आफ्नैलाई दुःख पोख्ने गरिन्छ । दुःखमा अनायास ‘आमा’ शब्द पोखिए जस्तै ।
दुःखको नियम नै हो कि जब व्यक्ति असिम दुःखमा पर्छ, दुःखले प्रकटीकरणको माध्यम खोज्छ, प्रकटीकरण हुन पनि पाउनुपर्छ । दुःख समयमा पोखिन पायो भने व्यक्ति संम्हालिन सक्छ । अन्यथा दुःखको गुम्साइमा मानिस डिप्रेसनमा पुग्न सक्छ, विस्फोट हुनसक्छ र त्यसको प्रवेगले व्यक्तिलाई सिध्याउन पनि सक्छ । विस्फोटको आयतन ठूलो भए समाजलाई नै विध्वंशतिर लैजान वेर लाउँदैन । जीवन संघर्षमा पराजित हुँदा दुःखले स्वाभाविक निकास पाउनैपर्छ । होइन भने व्यक्ति बल्न सक्छ । समाज र सभ्यता जल्न सक्छ ।
कथामार्फत अनुभूति पोखिनु दुःखको नियम हो । श्रुतिमार्फत पीडा पोखिनु पनि दुःखको नियम हो । कोही रंगमा दुःख भर्छन्, कोही कथा र कोही गीतसंगीतमा । नसक्नेहरू दुःख सुनाउन थाक्दैनन् र अन्य प्राणी र वनस्पतिलाई एकान्तमा गुन्गुनाएर पनि दुःख पोख्ने गर्छन् । मनमनै गुनगुनाएर वा आँशुमार्फत पोखिएर पनि हलुको हुनु मनको चाहना होला । कतिपय दुःखी त कुकुर, घोडा जस्ता मन परेका जानावरहरूलाई ‘मन’ पोख्न पछि पर्दैनन् । शायद जनावर निःस्वार्थ र निश्छल छन्, त्यसैले ती दुःखका आफ्ना साथी हुन् ।
दुःख अन्तर्मुखी होइन र हुन दिनु पनि हुँदैन । कोही नपाए प्रकृति र परिवेशमा एक्लै पनि दुःख पोखिन दिनुपर्छ । कराएर, दाह्रा किटेर, चिच्याएर वा डाको छाडेर पनि दुःख पोखिनुपर्छ । असिम पीडामा नरोएको को छ र ?
तर महत्त्वाकांक्षीहरू अरुको दुःख बेवास्ता गर्छन् । महत्त्वाकांक्षाले स्वार्थ र निजत्वलाई निरन्तर बढावा दिँदै आएको छ । उनीहरूका लागि साथी र सहयोगी पनि प्रगतिका खुट्किला चढ्ने भर्‍याङ सिवाय अरु केही होइनन् । त्यसैले अरुलाई इग्नोर गर्नु र अवसरमा रमाउनु उनीहरूको प्रवृत्ति हो तर जब आफैंलाई दुःख पर्छ, सहयोगको याचना गर्न पछि पर्दैनन् । तैपनि यसअघिको प्रवृत्तिमा पश्चाताप हुँदैन । मानिसहरू स्वार्थमा किन साँघुरिदैछन् ? मानवता फराकिने आन्दोलन कहिले शुरू होला ?
दुःख नहुँदो हो त मानिसहरू एकअर्काबाट कति टाढा हुने थिए । दुःख बाँड्नका लागि नै आवश्यकताले मानिसहरूलाई नजिक्याएको हो तर स्वार्थ र निजत्वले मानिसलाई कम मानवीय, कम नजिक र कम मायामा साँघुर्‍याएको छ ।
आफ्नो दुःख मात्र आफूलाई दुख्छ । आफ्नो पीडा मात्र आफूलाई अनुभूति हुन्छ । आप्mनै मर्म मात्र मनले बोध गर्छ । समवेदनाबोध त सहानुभूति न हो । समाज साँघुरिदै जाँदा, समाजमा मानवीय समवेदना सकिँदै जाँदा आफ्नो दुःख आफैंलाई मात्र दुख्छ । मन रित्याउने गरी दुःख पोख्न पनि आफ्नै मनको सहारा चाहिन्छ । संसार थर्काउने गरी चिच्याउन पनि आफ्नै मन चाहिन्छ । दुःखीसँग फगत मन छ । मन कहाँ छ थाहा छैन तर उससँग मन छ । मन कहिल्यै रित्तिदैन, मन कहिले सकिँदैन । मन छ त मानिस छ, मानिस छ त दुःख छ ।